လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက Stress တွေကို ဘလိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ... - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက Stress တွေကို ဘလိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ…
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက Stress တွေကို ဘလိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ…
Min Thuta | Knowledge | January 25, 2021
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြီးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုထက်ပိုလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးတာမျိုးကတော့ အလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရဖို့ဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းအလုပ်ခွင်ကရတဲ့ ဖိစီးမှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုဟာကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ ခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာအားနည်းတတ်ကျပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုအပေါ်အလွန်အမင်းဖိအားထားတတ်ပြီး မလုပ်ရသေးခင်မှာပဲ အချိန်မှီမပြီးစီးမှာစိုးရိမ်တတ်တဲ့ အချက်ဟာ အလုပ်အပေါ်သက်ရောက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အလုပ်အတွက် Planning လုပ်တဲ့အခါ အစီအစဉ်တကျဖြစ်စေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အချိန်ဇယား ကိုစနစ်တကျစီမံတတ်ဖို့ပါ။
သင့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးသွားလဲ ဘာကြောင့်ကုန်ဆုံးသွားလဲ စတာတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်ဖို့နဲ့ပြန်လည်စီစစ်နိုင်ဖို့အတွက် အချိန်ဇယား ကိုသေချာလုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ အချိန်ဇယားလုပ်ထားခြင့်ဖြင့် အလုပ်ကိုစနစ်တကျအာရုံစိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင်လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေကိုသူ့အချိန်နဲ့သူအချိန်ကိုက်လုပ်ဖြစ်တာကြောင့် အချိန်တွေကိုအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေအပေါ်အ သုံးချတာလျော့နည်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအချိန်ဇယားမျိုးလဲဆိုတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ -ပထမဆုံးသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်တွေထဲမှာမှ အလုပ်နဲ့ပက်သက်တာတွေအတွက်အ ချိန်ဘယ်လောက် ပေးနိုင်မလဲ ဒါမှမဟုတ် သုံးနိုင်မလဲ ချရေးပါ။
ဥပမာ လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်ချိန် ၈ နာရီဆို အဆိုပါ ၈ နာရီအတွက်အချိန်ကိုရေးပါ။ Rescue Time လိုမျိုး Tool တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည် သင့်ရဲ့ Personal Information တွေကို Track လုပ်ပြီးသင့်ရဲ့တနေ့တာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ ဆိုတာ အချိန်ဇယားလုပ်လို့ရပါတယ်။ သင်လုပ်ရမဲ့ တာဝန်နဲ့ သင့်ရဲ့အချိန်ကိုညှိနှိုင်းပြီး သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ဇယားကို ချမှတ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အရေးကြီး တဲ့အချက်ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်မပြီးခင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းမိနေတာ အလုပ် အတွက်လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး Social Network တွေကိုသုံးဖြစ်နေတာစတာတွေကိုလျော့ချဖို့ပါ။ အလုပ်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတဲ့အချက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဆိုပေမဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ အလုပ်အပေါ်ပဲအာရုံစိုက်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်တာဟာ အလုပ်ကိုပိုပြီးမြောက်အောင် မြင်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Social Network တွေပေါ်မှာ အလုပ်အချိန်တွင်းအလုပ်အတွက်လို အပ်တာထက်ပိုပြီးအချိန်ကြာကြာရှိနေခြင်းဟာလည်း အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ထိုအခါ တစ်နေ့တာပြီးမြောက်ရမဲ့အလုပ်တွေ မပြီးဖြစ်ကာ စိတ်ဖိစီးလာပြီးအလုပ်မှာလဲမပျော်နိုင်တော့ ပါဘူး။
နောက်ထပ်လိုတဲ့အချက်ကတော့ သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ပါ။လုပ်အားခနဲ့ရာထူးအတွက်အ လုပ် လုပ်တာမဟုတ်ပဲ သင့်အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ သင်လုပ်ရမဲ့တာဝန်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက် စိတ်ဓာတ်စတာတွေလဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာသင့်ကိုယ်သင်ပြန်မေးဖို့လိုပါပြီ သင်တန်ဖိုးထားတဲ့ သင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့သင့်ဘဝရဲ့ပန်းတိုင် သင့်ရည်ရွယ်တဲ့အလုပ်ဆိုဘာလဲ၊သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကသင့်အတွက်လွယ်ကူနိုင်လား ဒါမှမဟုတ် ခက်ခဲတဲ့ခြေလှမ်းလား၊ သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်ဘယ်လောက်တ န်ဖိုးထားလဲ သင့်အလုပ်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိရဲ့လား စတဲ့အချက်တွေပါ။ ဒါတွေကိုသိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်လို့သင့်မှာအဖြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်အပေါ်သေချာပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ။အလုပ်ရဲ့ဖိစီးမှုဒဏ်တွေလျော့နည်းအောင် အလုပ်ကိုအချိန်မှီပြီးမြောက်ဖို့ Time Management ကိုသေချာစီစစ်ရုံသာမက သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ် တန်ဖိုးထားပြီးကြိုးစားချင်စိတ်သာရှိမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာဖိအားကင်းပြီး အောင်မြင်တဲ့အနေအထား တစ်ခုကိုရောက်လာမှာမလွဲပါဘူး။
YBS ယာဉ်စီးခနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်
by Moe Hein on March 5, 2018 -0Comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်လောက်အတွင်းမှာ YBS ယာဉ်စီးခနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Facebook ပေါ်မှာ လူထုအသံလေးတွေ သိသိသာသာကျယ်လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ တပြိုင်တည်းဆိုသလို Bus oper...
မကြာခင်ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတော့မည့် လူရဲ့အရေပြားပေါ်က ဖုန်း
by tmblog on April 16, 2016 -0Comments
လက်ကောက်ဝတ်အရေပြားကို မျက်နှာပြင်အဖြစ် ထိတွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ့် လက်ကောက်ဝတ်ဖုန်းတစ်မျိုး ဈေးကွက်ထဲရောက်လာတော့ပါမယ်။ Cicret လို့ခေါ်တဲ့ ဒီလက်ကောက်ဟာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ...
by tmblog on March 1, 2015 -0Comments
ဒီဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ အင်္ကျီရဲ့အရောင်ကို သေချာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူကိုလဲ ပြပြီးမေးကြည့်၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ဒေါင်းပြီး သူများတွေကိုလဲပြပြီးမေးကြည့်ပါ။ ဘာ...
by tmblog on December 11, 2014 -0Comments
Fable ဟု လူသိများထင်ရှားသည့် ပုံပြင်အမျိုးအစားမှာ ဖတ်ရှုသူများအား သင်ခန်းစာပေးသော ပုံပြင် များ ဖြစ်ပြီး အီစွပ်ရေးသားသောပုံပြင်များမှာ Aesop’s Fables ဟုပြောစမှတ်...
မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာဝတ်စုံများ
by Moe Hein on April 27, 2018 -0Comments
ဒီတစ်ပတ် တင်ဆက်ပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာဝတ်စုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာဝတ်စုံတွေကို ပုံမှန်မြင်နေကျ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ...
2018 Lexus LX 570 July 23, 2020
BMW 2002 bumper (1968-1971) by stainless steel January 2, 2020
1998 Toyota Supra Turbo September 23, 2019
2016 Lexus Lx 570 For Sale Full Option September 23, 2019
New/Used:Snowmobiles/watercraft/Jet Ski and ATV spare parts August 20, 2019
New/Used Outboard Motor engine,Trailers,Minn Kota,Humminbird,Garmin August 20, 2019
FREE GLOBAL HOME BUSINESS OPPORTUNITY August 20, 2019
For Sale Original iPhone Xs Max,Samsung S10 Plus,S10E,iPhone x August 20, 2019
US Technosoft Pvt. Ltd. August 20, 2019
© 2021 Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog. All Rights Reserved.
All times are GMT 6.5. The time now is 6:16 pm.